အခမဲ့ Ebook: Up ကိုနားထောင်! ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအတွက်လူမှုရေးနားထောင်ခြင်း Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 16, 2013 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 16, 2013 Douglas Karr
သူတို့လုပ်လား အမှန် သင့်လိုပဲ? ဒီခေတ်မှာရှာရန်မလွယ်ကူပါ။
လူမှုရေးနားထောင်ခြင်း ပွဲတစ်ပွဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုယ်တိုင်ကကတည်းကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အထင်ရှားဆုံးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ခံရှိသူများသည်သင်၏ဖောက်သည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုစစ်တမ်းများ၊ အုပ်စုများနှင့် / သို့မဟုတ်ငြီးငွေ့စရာသုတေသနပြုခြင်းများကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့နားလည်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များကိုသတိရကြသည်။ ငါတို့လိုချင်ခဲ့တယ်
ယခုခေတ်တွင်စျေးကြီး၊ အချိန်ကုန်၊ ချက်ချင်းသမိုင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသောတန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်ယခုအချိန်တွင် real-time နှင့်လွယ်ကူလာသည်။ လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မဟုတ်ပါ၊ သင်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အခြားအသုံးချမှုများအတွက်နားထောင်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလူများပြောနေသည့်အရာကိုသင်သိလိုလျှင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလူမှုဆက်သွယ်မှုသည်ရှာဖွေရလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာ အရည်ပျော်ရေ သူတို့ရဲ့ e-book အသစ်ဖြန့်ချိပြီ Listen Up: ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအတွက်လူမှုရေးနားထောင်ခြင်းအသုံးပြုရန်အတွက်အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန် ကရေးသား Leslie Nuccio။ Leslie သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်မှုတွင်နက်ရှိုင်းစွာငုပ်လျှိုးနေသည်။
ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့မောင်းနှင်ရမည်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည် နှုတ်ကပတ်တော် -of ပါးစပ်စျေးကွက်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ရှာရန် တကယ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်, ဘယ္လို ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ် tabs စောင့်ရှောက်လော့, ဘယ္လို ဘယ်သူပြောနေတာလဲဆိုတာဖော်ထုတ်ပါ မင်းရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်း၊ အရေးကြီးသောပြောဆိုမှုများကိုရှာဖွေပါ နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် meme စတင်ရန်ဘယ်လို! ၎င်းသည်ဟာသ၊ ထူးကဲသောနမူနာများ၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုပ်ပိုးထားသောရောင်စုံစာမျက်နှာပေါင်း ၃၀ ကျော်ကိုသင်ယခုအချိန်တွင်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်နိုင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်တွစ်တာအသုံးပြုသူများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပေးပို့ကြသည် တစ်နေ့ကိုတွစ်တာဘီလီယံ ၄၀၀ဒစ်ဂျစ်တယ်နားကြပ်မတန်လား။
Tags: အပြိုင်အဆိုင်နားထောင်ခြင်းebookနားထောင်ပါသင့်ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်လူမှုရေးနားထောင်ခြင်းလူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်လူမှုစောင့်ကြည့်မှုအမျိုးသမီးစကားလုံး -of ပါးစပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး